Isbuunyo Qurxin Jumlo Puff / Isku dar ah soo saaraha Astaamiyaha iyo Alaab-qeybiyaha | Meibaoli
Qurxinta Isbuunyada Puff / Isku darida leh Logo Gaara
Makeup sponge waa mid ka mid ah waxyaabaha la isku qurxiyo ee loo baahan yahay gabdhaha. Isbuunyada qurxinta si aan habooneyn ayey u khuseysaa qurxinta xirfad ahaan xitaa iyo maqaarka jilicsan. Waxay ku dhejin kartaa qurxiyo si dhakhso ah. Ugu waxtarka badan marka loo isticmaalo budada si kastaba ha noqotee waxaa loo isticmaali karaa dareere iyo kareemo. Waxay sidoo kale soo saari kartaa oo ka saari kartaa qurxinta.
Waxyaabaha: Isbuunyo (polyurethane)
La dhaqi karo: HAA
Xidhmada: 100pcs / bac, 1200pcs / kartoon,
Cabbirka kartoonka 40 * 45 * 60cm ama
1500pcs / kartoonka cabbirka kartoonka 45 * 45 * 60cm,
Xidhmada ayaa loo habeyn karaa sida codsigaaga.
Logo: Logo Customized Waa la aqbali karaa, OEM iyo ODM waa la soo dhaweynayaa.
Cabir: 40mm * 60mm
Qaab: Isbuunyo Qurxiyo Ilmo, Isbuunyo Qurxiyo Cucurbit, Isbuunyo qurxin leh oo la gooyey, Qaab loo qaabeeyey
Isbuunyada la isku qurxiyo waa qalab aad loo jecel yahay xilligan la joogo. Waa jilicsan oo maqaarka u roon. Maaddada isbuunyada lagu qurxiyo waa polyurethane hydrophilic, oo weynaata markay biyaha la kulmaan. Marka isbuunyada qurxinta ay qalalan tahay, waxay dareemeysaa jilicsanaan aad u weyn, oo u dhow maqaarka, buuxa oo laastik ah. Isbuunyada la isku qurxiyo waxay leedahay awood xoogan oo ay ku soo nuugi karto biyaha, laakiin wey sii weynaaneysaa markay taabato biyaha. Ku hay calaacasha gacantaada oo si tartiib ah u tuuji, qoyaanka si fudud ayaa loo sii daayaa oo awood u soo celinta ayaa noqon doonta mid aad u xoogan. Waana mid fudud.
Isbuunyada qurxinta leh daloolada waaweyn waxay leeyihiin cufnaan xoogaa yar, waxayna dareemi doontaa budo jilicsan oo badan. Noocan ah isbuunyada la isku qurxiyo waxay ku habboon tahay qurxinta waxyaabaha qaro weyn leh iyo kuwa qaro weyn, sida kareemka aasaaska, qarinta, iwm. Isbuunyada qurxinta ee leh stomata yar ayaa leh cufnaan sare iyo dareemid gacan adag. Noocan ah isbuunyada qurxinta ayaa ku habboon dareeraha aasaasiga ah ee dhuuban, kareemka BB, kareemka go'doominta, iwm.
Isticmaalka isbuunyada la isku qurxiyo waa sida soo socota. Isticmaal qallalan tusaale ahaan. Toos ugu xoq budada qalalan. U isticmaal isbuunjiga si aad wajigaaga gadaal iyo gadaalba u salaaxdid tartiib tartiib ah oo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah. U isticmaal qayb caara ah si aad u qurxiso geeskaaga adag in la gaaro sida baalka sanka iyo isha. Tusaale ahaan qoyan. Dheji isbuunyada kareemka aasaaskaaga ama wax qariya oo wejiga mari iyadoo la adeegsanayo dhaqdhaqaaq xayeysiinaya, si tartiib ah ugu shub badeecada si ay isugu qasmaan. U adeegso dhammaadka wareegsan si aad u daboosho aagagga waaweyn iyo dhamaadka caaradda ee sanka, afka iyo indhaha. Xaaq dhinaca xagalka ah ee isbuunyada ee sheyga oo dhan oo mari meelaha sare ee wejiga sida dusha dhabannada, buundada sanka, lafta xoqida iyo qaansada koobka.
Iskeelka qurxinta waxaa lagu dhaqi karaa saabuun fudud iyo biyo. Dabcan waa dib loo isticmaali karaa. Waxay kaloo keydisaa booska waana sahal in la qaado. Iyada oo ku saleysan faa'iidooyinka kor ku xusan, isbuunyo qurxin ah ayaa dadku u roon yihiin.
Hore: Isbuunyada Isbuunyada Qurxinta Isku Darka
Xiga: Isbuunyada Qurxinta Quruxda leh Logo
Isbuunyada Isbuunyada Qurxinta Isku Darka
Isbuunyada Qurxinta Quruxda leh Logo